Amakhethini aMnyama aMnyama aKhala aNgwevu, eTshayina UkuKhanya okuNgwevu Kumnyama okuMnyama amakhethini abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-Zhejiang Rancho Santa Fe ekhaya textile Co.,Ltd
Inani Model: NGWEVU
UMPHUMELA OMKHULU & NOMTHETHO WOMNTU -Ifestile efanelekileyo yokugqoka umhlobiso wasekhaya, ngakumbi iKrisimesi, i-Thanksgiving Day. Imibala emininzi yokukhetha, ifanelekile kwisitayela esahlukileyo. Ilaphu ngokwalo lelinye lawona maxwebhu adumileyo kwihlabathi liphela. Ngenkangeleko entle, inika umoya opholileyo kunye nokhululekile kwigumbi. I-Material yi-100% yepolyester, inokuthintela ukukhanya kwe-85% -93% kunye ne-UV ray.
UKUVIKELA OKUKHANYA & OKUGQIBELELEYO UKUFUMANA KWE-THERMAL –.ziikhethini ezimnyama okanye zimnyama. Ubunzima belaphu busuka kwi-200gsm ukuya kwi-320gsm. Zithambile kwaye ziyathandeka ukuzibamba. Ukongezwa okugqibeleleyo kwigumbi lokulala, igumbi lokuhlala, igumbi labantwana njalo njalo. Izinto ezikhethiweyo ezisemgangathweni, akukho zi-hems ezingalinganiyo, kunye nokulawulwa komgangatho ongqongqo kumava angcono emveliso.Njengoko umphumo wabasebenzi ubonisa, amakhethini anokunciphisa i-10-15% ingxolo. Awuyi kuthwala isandi sommelwane kunye nekhwelo yemoto. Kulunge ngokwenene ukulala, ngakumbi kwiintsana.
I-100% i-polyester. Imathiriyeli efanayo kunye nombala ngasemva njengangaphambili. Umatshini unokuhlanjwa ngaphantsi kwe-30 degrees. Zive ukhululekile malunga nokuqhagamshelana nathi ukuba unayo nayiphi na eminye imibuzo.
Yenziwe ukusuka kwi-100% ye-premium yekhwalithi ye-Super Soft ilaphu (i-Polyester, iNgeniswa ngaphandle). Iikhethini ezimnyama zepensile zihlala ixesha elide kwaye kumnandi ukuzibamba. Vimba i-85-95% yokukhanya kwelanga kunye nemitha ye-UV (Umbala omnyama usebenza ngcono) ngaphandle komgca wokubulela kwiteknoloji yokuluka kathathu. Umthunzi okhanyayo kunye nokunciphisa ingxolo kwindawo yabucala kunye nokulala okungaphazanyiswa. Ngoko inokuqinisekisa ukuba abantu abayi kuphazanyiswa lihlabathi langaphandle.
I-Soft Weave edibeneyo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokuKhanya okuGrey Plain okuQinisekileyo okuMnyama kwekhethini yethu8267